Hong Kong dia niantoka fisehoan-javatra MICE marobe voalohany teo anelanelan'ny fanambin'ny COVID-19
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Hong Kong dia niantoka fisehoan-javatra MICE marobe voalohany teo anelanelan'ny fanambin'ny COVID-19
Septambra 9, 2020
Ny Birao fizahan-tany any Hong Kong (HKTB) dia nanambara fa Hong Kong dia voafidy ho tanàna mpampiantrano mandritra ny hetsika iraisam-pirenena miisa efatra MICE, ao anatin'izany ny hetsika voalohany misy lanja stratejika avo indrindra eto an-tanàna, ary hetsika roa miverimberina ao anatin'ny fanamby COVID-19. Ireny hetsika ara-asa ireny dia antenaina hitondra mpitsidika 10,000 be mpampiasa amin'ny totaliny ary hitondra anjara biriky ara-toekarena lehibe ho an'ny tanàna ary handrisika ny fampandrosoana sehatra maro.
"Faly izahay mahita an'i Hong Kong mandresy hetsika MICE manan-danja ara-stratejika toy izany amin'ireo mpifaninana eran'izao tontolo izao," hoy ny Dr. YK Pang, filohan'ny HKTB. “Mampahery ny mahita hetsika lehibe hatao eto an-tanànantsika voalohany, toy ny International Airline Transport Association (IATA) World Cargo Symposium, Asia Sports Technology Conference ary ny Kongresin'ny Asian Society of Transplantation (CAST) 2023. Mampiseho ny fahatokisan'ny mpikarakara hetsika iraisam-pirenena an'i Hong Kong ho toy ny tanjona stratejika sy azo antoka ary ara-pahadiovana amin'ny hetsika orinasa malaza be io. Ny HKTB dia hanohy handray andraikitra mavitrika amin'ireo mpikarakara iraisam-pirenena sy Hong Kong mba hitady ny zon'ireo hetsika MICE lehibe ary hanatsara ny ezaka hisarihana hetsika miverimberina mba hitazomana ny satan'i Hong Kong ho The World Meeting Meeting. ”
Iray amin'ireo tetikady stratejika MICE an'ny Birao ny siansa ara-pitsaboana. Ny fandresen'i Ny Kongresin'ny fiarahamonina Aziatika momba ny fitiliana kardia (ASCI) 2022 manome famporisihana ny indostria MICE any Hong Kong. Dr. Lilian Leong, filoha mpanorina ary filoham-pirenena teo aloha ao amin'ny College of Radiologists any Hong Kong, dia nanasongadina ny lazan'ilay tanàna amin'ny asa mifandraika amin'izany ary ny fanohanana manerana ny mpikarakara MICE no anton'ny fandresena lehibe. “Ny toerana misy an'i Hong Kong eo amin'ny sehatry ny siansa ara-pitsaboana, indrindra ny radiolojia sy ny kardolojia, dia mampiavaka azy amin'ny fifaninanana”, hoy ny Dr. Lilian Leong. “Ny fivoriana sy fampirantiana Hong Kong (MEHK) dia nanolotra serivisy fijanonana matihanina isaky ny mandeha hatramin'ny dingana bidding. Feno fankasitrahana izahay noho ny fanohananay. ”
Andriamatoa Phillip King, mpanorina ary filohan'ny Varcis Group Ltd, dia nanazava ny fanapaha-keviny momba ny antony nifidianana an'i Hong Kong hampiantrano azy Konferansa teknolojia voalohany an'ny fanatanjahantena any Asia any amin'ny faritra Greater China. “Amin'ny maha vavahady mankamin'ny tanin'i Shina Tanibe sy ny tsenan'ny fanatanjahantena mihabe azy, Hong Kong no tanjona tsara indrindra hampiantranoana ity fihaonambe teknolojia fanatanjahantena voalohany ity miaraka amina fotodrafitrasa faran'izay tsara, mari-pahaizana matanjaka ara-bola sy ara-bola, fiarovana IP tsara ary lalàna iraisana, miampy fanavaozana tena tsara & Teknolojia Hub misy ekosistema fanombohana miroborobo. Mino tanteraka izahay fa hanintona ny iray amin'ireo mpanatrika marobe indrindra avy amin'ny faritra APEC izahay ho an'ny hetsika teknolojia fanatanjahantena tanterahina any Azia. ”
Ny tanjaky ny herin'i Hong Kong ihany koa dia manintona ny fiverenan'ny hetsika taloha. Andriamatoa Kenny Lo, Lehiben'ny mpanatanteraka, Vertical Expo Services Company Limited ary mpikarakara ny Asia Funeral and Cemetery Expo & Conference 2021 dia nanome ny fahatokisany hoe: "Hatramin'ny nahatongavan'ny andiany voalohany tany Hong Kong tamin'ny 2009 dia nivoatra tsikelikely ilay seho fampirantiana sy fihaonambe iraisam-pirenena lehibe indrindra ao amin'ny faritra Azia Pasifika. Matoky izahay fa hitondra avo ny fanontana telo manaraka ny tanàna. "
Ny HKTB dia nanomana andiana fanentanana fanarenana ho an'ny indostria MICE ary manara-maso akaiky ny fivoaran'ny areti-mifindra amin'ny tsena loharano samihafa. Hanomboka ny fampielezan-kevitra rehefa mety ny fotoana.
Ireto ny antsipiriany momba ny hetsika:
Event Zava-nisongadina andrasana
Daty naroso toerana
Konferansa teknolojia ara-panatanjahantena any Asia 2021
- Fihaonambe teknolojia fanatanjahantena B2B voalohany natao tany Hong Kong sy ny faritra Greater China 1,100 voalohany
Telovolana tamin'ny 2021
Park amin'ny siansa sy haitao HK
Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) Simposium ho an'ny entana an-tany 2022
Fivoriambe iraisam-pirenena momba ny entana an-habakabaka lehibe indrindra
Sambany tany Hong Kong
1,200 Mar 2022 talanjona
Ny Kongresin'ny fiarahamonina Aziatika momba ny fitiliana kardia (ASCI) 2022
- Niverina tany Hong Kong taorian'ny 11 taona hatramin'ny nanaovan'i Hong Kong ny kongresy tamin'ny 2011 700 Jun 2022 HKCEC
Ny Kongresin'ny Fikambanana Aziatika momba ny fambolena (CAST) 2023
Ny fivoriambe fitsaboana maharitra indrindra sy lava indrindra any Azia amin'ny
1,200 Aug 2023 HKCEC
Asia Crypto Week tamin'ny 2021 - Hetsika teknolojia cryptocurrency sy blockchain lehibe indrindra any Azia > 2,000
Mar 2021 Kerry Hotel Hong Kong
Asia Funeral and Cemetery Expo & Conference 2021, 2023 & 2025 - Ny lehibe indrindra amin'ny varotra any Azia 6,400 2021,
Ny fivoriambe fitsaboana maharitra indrindra sy lava indrindra any Azia amin'ny famindrana